आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर कुन देशको कति ? | ईमाउण्टेन समाचार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारको लागि विदेशी मुद्रा विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । अमेरिकी डलर १ को खरिद ११९.५० पैसा र बिक्रीदर १२०.१० पैसा रहेको छ ।
त्यसैगरी, बिहीबार युरोपियन युरो एकको खरिद मूल्य १३८.९१ पैसा छ भने बिक्रीदर १३९.६१ पैसा छ, क्यानेडियन डलर भाउ १ को खरिद मूल्य ९६.७१ पैसा र बिक्रीदर ९७.२० पैसा, अष्ट्रेलियन डलर १ को खरिददर ८९.४५ पैसा र बिक्रीदर भने ८९. ८९ पैसा रहेको छ ।
त्यस्तै, चाइनिज युआन १ खरिद गर्दा १८.६९ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर १८.७८ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, बिहीबार जापानी येन १०.४४ पैसा र बिक्रीदर १०.४९ पैसा रहेको छ ।
यसैगरी, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३१.८६ पैसा र बिक्रीदर ३२.३२ पैसा र कतारी रियाल एकको खरिद मूल्य ३२.८२ पैसा र बिक्री मूल्य ३२ .९९ पैसा रहेको छ । बैंकले बिहीबारका लागि मलेसियन रिंगिट एकको खरिद दर २८.७२ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर २८.८६ पैसा कायम गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कतारी रियाल १ को खरिदमा ३२.८२ पैसा र बिक्रीदर ३२.९९ पैसा तोकेको छ । यस्तै, चाइनिज युआन १ को खरिदमा १८.६९ पैसा बिक्रीदर १८.७८ पैसा तोकेको छ ।
अन्य विवरण तालिकामा :